Nkesa - Site Linux | Site Linux (Peeji nke 3)
Ihe oyiyi Ubuntu 18.04.1 LTS RC dị ugbu a maka ule ọha
Mmelite ndozi mbụ maka Ubuntu 18.04 LTS dị ugbu a, gbalịa Ubuntu 18.04.1 LTS ugbu a
SteamOS emelitere iji kpokọta ozi niile na Debian 8.11
Valve, ịhapụ ịhapụ mmepe SteamOS, ewepụtala ọhụụ ọhụrụ nke nkesa GNU / Linux. Sistemụ arụmọrụ n'uche Ọ bụrụ na egwuregwu vidio na-amasị gị ma ị bụ ezigbo egwuregwu, ị ga-achọ ụdị ọhụrụ nke SteamOS, yana atụmatụ ọhụrụ nke Debian 8.11
ReactOS 0.4.9 weputara n’onodu ya na otutu njirimara na oganihu ohuru
Ntughari ohuru nke ReactOS di ebe a, mara akuko na mmezi nile nke bia na ReactOS 0.4.9
5 Linux nkesa na-eku ume ndụ ọhụrụ gị PC ala-ego
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa ochie ị debere na akuku ma ọ bụ chefuo ebe ọ bụla n'ụlọ gị, ị nwere ike kpochapụ ya ma nye ya ndụ ọhụụ
Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ruru na njedebe nke okirikiri ya, melite ugbu a
Ubuntu 17.10 emechaala okirikiri ya, ọ gaghị enwe mmelite ọ bụla ọzọ, a na-atụ aro ka imelite ya na Ubuntu 18.04 LTS
Peppermint OS 9: nkesa na-adabere na ngwa igwe ojii
Peppermint OS bụ fechaa Linux na-ekesa, ọ dabere na teknụzụ Mozilla's Prism ma gosipụta ya dị ka usoro igwe ojii ọzọ.
4 Linux nkesa e mere iji kpọọ ọkacha mmasị gị utu aha na ha
N'isiokwu a anyị ga-eso gị kesaa ụfọdụ nkesa Linux kachasị mma kachasị mma iji nwee ike igwu na ha.
Ndị ọrụ OpenSUSE Tumbleweed na-anata LibreOffice 6.1, Mozilla Firefox 61 na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ.
Ọnwa a na-emegheSUSE Tumbleweed emelitere ugboro itoolu iji tinye ọtụtụ mmelite, anyị na-agwa gị nkọwa niile nke mmelite ndị a.
Debian GNU / Linux 9.5 "Stretch" dị njikere site na mmelite nche 100
Debian 9.5 "Ngbatị" dị ugbu a na mmelite ndị dị mkpa na-emetụta nchekwa nke nkesa GNU / Linux a. Kpọmkwem, Debian 9.5 dị ugbu a yana mmelite nche 100 na mmezi ndị ọzọ ga-eme ka ahụmịhe nke GNU / Linux a dịkwuo mma.
OpenMandriva Lx 3 na-enweta nnukwu mmelite tupu ụdị nke ọzọ na-esote
Tupu OpenMandriva Lx 4 abịarute, ndị ọrụ OpenMandriva Lx 3 na-enweta mmelite na ọtụtụ ndozi
Infographic: Ubuntu bu nde mmadu gburugburu uwa na-eji
Canonical ewepụtala infographic nke gosipụtara ụlọ ọrụ na ndị mmepe dị iche iche ji Ubuntu arụ ọrụ gburugburu ụwa.
Wine 3.12 dị njikere maka ndị ọrụ nwere mmasị
Ndị mmepe nke ọrụ Wine ewepụtala ụdị ọhụrụ nke akwa ngwakọ ama ama maka ama ama Windows na sistemụ Unix.
Ihe ohuru nke Recalbox 18.06.27 dị ugbu a
Naanị obere ihe karịrị otu izu gara aga, e wepụtara mbipute ọhụrụ nke Recalbox 18.06.27, nke sitere na nkwupụta na blọọgụ gọọmentị ya
SUSE Linux nke ụlọ ọrụ Sweden EQT Partners ga-azụta maka $ 2.5 ijeri
SUSE Linux ga-abụ akụkụ nke ndị mmekọ EQT, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ga-agbanwe maka ndị ọrụ njedebe
Linux Mint 19 Tara dị ugbu a na Cinnamon, Mate na XFCE
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Linux Mint 19 Tara ọhụrụ nke dị ugbu a na gburugburu eserese dị iche iche
Ọhụrụ mmelite Raspbian dị ugbu a iji budata
Site na nkwupụta ekwuputara mmelite ohuru a nke nwere ọtụtụ ndozi ahụhụ, Raspbian bụ sistemu ọrụ gọọmentị maka
PureOS: nkesa edere nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ
PureOS bu nkesa nke eji eji Debian eji eme ihe n’agha n’afe nke n’eji iji ngwanrọ emepere emepe eme ihe
Sistemụ arụmọrụ kacha mma maka Pipe Pi
Ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị na Raspbian, nke kpatara ya taa anyị ga - egosi gị ụfọdụ nkesa ndị dị maka Raspberry Pi gị.
Ejiri Ubuntu zuru ụwa ọnụ dịka data ntinye nke Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Ihe data anakọtara na ntinye nke Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver amalitela ịpụta na ebe anyị na-ewetara gị ya.
Otu ndị Debian na-achọ ndị nka nwere onyinye maka Debian 10 Buster
Ọ bụrụ n’ị bụ onye omenkà nwere ọgụgụ isi, oge eruola ka ị gosi ọrụ gị n’ụwa, ndị mmepe Debian 10 Buster na-achọ gị.
Vudị kwụsiri ike nke Devuan 2.0 ASCII dị njikere
Fewbọchị ole na ole gara aga, ewepụtara mbipụta nke Devuan, na-eru nsụgharị 2.0 ya yana aha koodu "ASCII" nke aha ...
OS na-adịghị agwụ agwụ: e mepụtara ọhụụ ọhụrụ maka ndị ọrụ na-enweghị ezigbo njikọ netwọk
OS na-adịghị agwụ agwụ bụ nkesa GNU / Linux nke na-abịa iji jikọta nkewa dijitalụ, ma na-elekwasị anya ugbu a na iji uru nke njikọ netwọk dị nwayọ
MX-Linux 17.1: Distro nke oge a, ọkụ, ike na enyi.
MX-Linux bụ ugbu a OS emere ya na desktọọpụ mara mma ma dị mma mana yana nhazi dị mfe, kwụsie ike, arụmọrụ siri ike.
emegheSUSE Tumbleweed emelitere na Linux Kernel 4.17 na KDE 5.13
openSUSE Tumbleweed na-enweta mmelite ọhụrụ na kernel ọhụrụ
Ndị ọrụ Ubuntu 18.04 LTS nwere ike ịwụnye Mesa 18.1.1
Ugbu a ị nwere ike iwunye ụdị nke Mesa 18.1.1 eserese na sistemụ gị, ebe a ka anyị ga-agwa gị otu esi eme ya.
GeckoLinux na-ebupụta ụdị nke mbụ ya dabere na openSUSE Leap 15
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke ụdị mbụ nke GeckoLinux dabere na OpenSUSE Leap 15
NixOS: nkesa GNU / LInux na-agbanwe agbanwe na nke oge a
NixOS bụ otu n'ime nkesa GNU / Linux ndị ahụ nwere ike ọ gaghị ama ama ma ọ bụ ewu ewu dị ka ndị ọzọ, mana o nwere ọtụtụ ihe iji gosipụta. Ya mere, taa anyị raara isiokwu a iji hụ uru ọrụ a na-atọ ụtọ na-enye anyị ...
Linux Kernel 3.2 na 4.1 na-abịa na njedebe, ndị ọrụ gị ga-imelite ugbu a
Linux emelitere kernel 3.2 nke ohuru mana ọ dị ka ọ bụ mmelite ikpeazụ na usoro a, ọ bụ oge imelite.
Fedora 26 na - ejedebe ndụ ya n’oge na - adịghị anya, ọ ga - akwụsị ịnata nkwado, melite ugbu a na ụdị kachasị nke sistemu a.
LinuxConsole: nkesa gbadoro anya maka egwuregwu vidiyo
LinuxConsole bụ nkesa Linux na-abịa na-ebugo ọtụtụ ngwanrọ na-emeghe na ngwanrọ na egwuregwu, na-elekwasị anya na ụmụaka na kọmputa ochie. LinuxConsole na-enyekwa nkwado maka ọtụtụ kaadị eserese ọhụụ na nke ochie.
Debian 8 Jessie nche mmelite ga-akwụsị na June 17
Anyị na-achọ ịsị goodbye Debian 8 nche mmelite Jessie, mara ihe niile nkọwa na ụbọchị maka LTS mbipute
A ga-ahapụ Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish na Ọktọba 18
A mara ọkwa ụbọchị maka ọkwa dị iche iche nke Ubuntu 18.10, mara nkọwa nke usoro mmepe ya
Emeelarị ụdị ọhụrụ nke Voyager 18.04 GS LTS
Ternyaahụ ka e wepụtara Voyager Gamers ọhụrụ, nke bụ akụkụ nhazi nke Xubuntu nke onye ọrụ French mepụtara iji gbanwee usoro maka mkpa ha yana oge m kpebiri ịkekọrịta oyi akwa a. nke ịhazi onwe gị na ndị ọzọ.
Q4OS: nkesa di omimi nke di ka Windows XP
Q4OS bu uzo mmeghe nke Linux Linux nke Debian nke nwere ihe nlere anya, o di nfe ma buru enyi na enyi novice, na enye ebe desktọọpụ a na-akpọ Atọ n’Ime Otu, nke a makwaara dị ka TDE Trinity Desktop Environment, dịka Windows XP na Windows 7 ozugbo.
Versiondị ọhụrụ nke RoboLinux 9.2 dị ugbu a
RoboLinux nwere ngwa nke o ji akwado onwe ya iji nye ohere ka e gbue ngwa Windows na sistemụ a, ngwa a bụ "StealthVM" nke bụ ihu ọma igwe mebere. Nke a na-agba ọsọ na ndabere na-enye anyị ohere virtualize mbipụta nke Windows.
CorvOS: nkesa GNU / Linux kesara nke ukwuu maka klaasị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ikesa GNU / Linux ọhụrụ ma ike gwụrụ gị ndị dị, a na m akpọ gị oku ịchọpụta ihe ọhụrụ na CorvOS.
Emeela ka gọọmentị Fedora 28 pụta, mara nkọwa ebe a
Ternyaahụ ka emepụtara ụdị Fedora ọhụrụ, na-eru nsụgharị Fedora 28 nke ha na-ewebata mmezi na atụmatụ ọhụrụ maka nkesa Linux a dị ebube. O doro anya na Fedora edobere onwe ya dị ka nkesa Linux siri ike ma sie ike
MagpieOS: nkesa Bangladesh na-adabere Arch Linux
Taa, anyị ga-ewere ohere ileba anya na nke Linux a na-adịkarị ọhụụ. MagpieOS bụ nkesa Linux nke ndị na-eto eto Bangladesh kere, ekepụtara ya na ebumnuche dị mfe nke ịmepụta nkesa Linux ya.
Ngwaọrụ iji mepụta clone draịvụ ike gị Clonezilla 2.5.5-38 Stable dị ugbu a
Clonezilla bụ sọftụwia yiri Norton Ghost nke, n'adịghị ka nke a Clonezilla, bụ kpamkpam n'efu ma meghee ya dịka ọ dabere na usoro ọrụ mmalite, dị ka nkebi Image. Ọ nwere nsụgharị abụọ: ihe osise dị ndụ na nke ọzọ bụ mbipụta sava.
GNOME 3.28 na-enweta nkwụsị Point Point mbụ ya
GNOME 3.28, mbipụta kachasị ọhụrụ nke gburugburu eserese eserese, anatala mbụ ya Mwepụta Point ma dị njikere ịbanye ebe nchekwa gọọmentị.
Ubuntu 18.04 LTS na-enye ndị ọrụ ya ohere ịhọrọ n'etiti nrụnye nkịtị na ntakịrị
Ugbu a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti obere nwụnye ma ọ bụ nrụnye nkịtị site na ntinye ntinye Ubuntu 18.04 LTS
Beta ikpeazụ nke Ubuntu 18.04 LTS dị ugbu a maka nbudata
Beta ikpeazụ nke Ubuntu 18.04 dị ebe a ma anyị bụ naanị izu ole na ole tupu akara ngosi ahụ abịa.
MinerOS GNU / Linux: Sistemụ arụmọrụ maka Ngwuputa Ngwuputa (MilagrOS)
Ekele, ndị otu na ndị ọbịa nke nnukwu Blog a zuru oke nke iru mba ụwa na sọftụwia efu na GNU / Linux. Mgbe…
Etu esi enweta ego niile nke Linux Mint
Abụ m onye ọrụ Linux Mint ma ruo taa m chetara na na nsụgharị ndị gara aga nke distro ha abịaworị ...
Linux ogba aghara: Revolutionizing Arch
Mgbe obere oge na-enweghị ịgbanwe distro na kọmputa m n'ihi ule dị mma anyị na-eme ...
KXStudio: Distro maka ndị na-emepụta Audio Audio
Na ụwa Linux enwere distros maka ihe masịrị gị na mkpa ya, yabụ ọ na-adaba adaba mgbe niile ịchọ otu ...
Nzọụkwụ 20 Ntuziaka iji wụnye Gentoo
Usoro ntinye nke Gentoo nke m mutara iji zụọ ihe ọ bụla. Ihe dị mma, ma ọ ga-emepe ụzọ maka ụwa ọhụrụ.
Gentoo: Maka na onweghi ihe zuru oke
Dị ka ebe ọ bụla, na obodo, ọ dịghị ihe nwere ike izu oke, mana ebe a ka anyị ga-ekpughere ụfọdụ akụkọ ifo ndị gbara Gentoo gburugburu ogologo oge.
Gentoo: Gini mere ị chọghị Gentoo ISO iji wụnye ya?
N'ihi na ISO bụ akụkụ mbụ nke nrụnye, enweghị m ike ịgabiga ohere ịgwa gị ntakịrị gbasara otu anyị siri bido na Gentoo.
Uzo di iche iche: Otu esi eme ka nkpuru osisi gi ghara idi anwu anwa
Kernel bụ obi nke nkesa Linux ọ bụla, ebe ọ na-agwa ngwaike gị niile na ngwanrọ ị na-agba na ya, yabụ nhazi ya dị mkpa
Gentoo: Obi nke anụ ọhịa
Usoro njikwa ngwugwu, Portage, bụ otu ụdị ma na-enye ndị ọrụ Gentoo ohere ị nweta nchịkọta nke mmemme ọ bụla.
Gentoo: Gini mere m jiri chiko ihe nkem?
Kedu ihe mere mkpokọta ji bụrụ ihe mbụ ị ga - ahọrọ mgbe ị nwere kọmputa ọgbara ọhụụ ma ọ bụ nke nwere oge buru ibu. Uru nke Linux Linux.
Linux Linux: Akụkọ banyere njem
My Gentoo Linux akụkọ, a njem gafee niile Linux ụwa, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Gbanwee pipụ piba gị n'ime ihe egwuregwu na Lakka
Na isiokwu Ebee ka izu Ele Igwe? Anyị kwuru na anyị na-edozi ụlọ nyocha eletrọniki, nke anyị na - ejikọkwa ...
Wifislax64: Ezigbo distro maka nchekwa na netwọki WiFi
Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ FromLinux anụla banyere Wifislax64 na ụfọdụ ndị ọzọ bụ ...
Voyager 16.04.3: Ọgbụgba ọkụ na ọmarịcha nke dabere na Xubuntu
Ihe mara mma na nke Linux nke Linux gbadoro ọsọ ọsọ, oge agafeela ...
Linux Lite 3.4: Dị fechaa, ọ dị ọhụrụ na Ubuntu dabere
Fewbọchị ole na ole gara aga, etinyego m oge dị ukwuu na-anwale distro a na-akpọ Linux Lite nke dịworị na nsụgharị 3.4, ndị ...
SparkyLinux 4.6, nke dika Debian gbadoro ghago, di
Debian 9 ewetawo ọtụtụ ndozi na ndozi, ọ bụ ya mere ọgba aghara ndị dabere na Debian ji ...
Linux Mint 18.2 "Sonya" mbipụta beta dị na KDE 5.8 na ndabara
Ọtụtụ bụ ịhụnanya m nwere maka Linux Mint, ọ dịla anya ọ bụ isi distro m na-agbanwe ...
MX Linux: Ngwa ngwa ngwa, enyi na enyi na ngwa di egwu
Site na njikọ nke antiX na ochie MEPIS obodo, MX Linux dị egwu amụrụ https://mxlinux.org/, nke na-etinye ngwaọrụ kachasị mma ...
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena"
Dị ka ọ dị na Linux Mint gara aga, taa, agara m etinye nhicha Linux Mint 18.1 "Serena" na ...
Odi akwukwo nke Trisquel GNU / Linux 8.0 «Flidas»
Ọtụtụ ga-amata Trisquel, nkesa GNU / Linux dabere na Ubuntu nakwa na Free Software Foundation ghotara dị ka 100% n'efu, ndị ...
SUSE Linux Enterprise 12 SP2 dị
Site n'ọ joyụ dị ukwuu anyị nwere ike ịlele iyi nke SUSECON 2016, nke dị maka nbudata SUSE Linux Enterprise ...
Dị Arch Linux 2016.11.01 na Linux Kernel 4.8.6 dị na Linux
Site na softpedia anyị chọpụtara na ụdị Arch Linux 2016.11.01 dị ugbu a maka nbudata, ihe ...
Bodhi Linux 4.0.0 dị: Uro nke Ubuntu bu lightweight distro
Kemgbe ụnyaahụ, Bodhi Linux version 4.0.0 dị maka nbudata, nke dabere na ...
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah"
Taa m wụnyere Linux Mint 18 "Sarah" na Cinnamon desktọọpụ gburugburu ebe obibi, nke na akpa ilekiri na-akpa àgwà ọma ...
OpenSUSE Tumbleweed na-eme ka ọdịyo, Graphics na ọrụ nkwukọrịta ya ka mma
Taa m tetere na ozi ọma ahụ na ọhụụ ọhụrụSUSE Tumbleweed Snapshots dị ugbu a (kemgbe ụnyaahụ), ...
Ndị a bụ ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịme mgbe ntinye ọhụrụ nke Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn.
Plasma Mobile adịla adị n'ezie
Ekwesịrị m ịsị, enwere m obi ụtọ. Fewbọchị ole na ole gara aga, mgbe m hụrụ ọganihu Plasma Mobile na ọrụ Plasma Phone, ekwuru m banyere ...
Ubuntu 14.10 na ezinụlọ dị ugbu a ibudata, yabụ anyị na-eche, ọ ga-abawanye mmelite? Ka anyị lee ihe dị ọhụrụ.
Semplice Linux: Ndochi maka Crunchbang?
Enweghị m mmasị na nkesa dị ntakịrị, ma ọ bụ karịa, nke na-abịa na ndabara na Window Managers for ...
Ubuntu 15.04 Vivid Vermet, ihe ị ga-atụ anya ya?
Mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke Ubuntu na-eru nso, dịka anyị nọ n'April 2015 wee bụrụ ugbua ...
Ugbu a ị nwere ike ịnwale Ubuntu site na ihe nchọgharị weebụ gị
Canonical na ọchịchọ ịnye ahụmịhe dị nso na nkesa Ubuntu Linux a ma ama, ụlọ ọrụ a na-emepụta ...
Antergos na-echezi maka ọdịdị nke KDE
Anọ m na-eji Archlinux kemgbe afọ 2 na-agbanwe agbanwe nkesa, yana ebe m chọpụtara na Antergos ...
Dị Manjaro 0.8.13 ..
A tọhapụrụ Manjaro mbipute 0.8.13 taa na ụfọdụ mgbanwe ndị mara mma. Anyị na-egosi gị ụfọdụ akụkọ….
Obere ntughari uche na Elementary OS Freya na Antergos 2015.04
Edere m post a ka m kọọrọ gị obere ngosipụta (yana njirisi m) na nkọwa ụfọdụ nwere ...
Apricity OS na ya anụ version bụ ebe a!
N’isiokwu gara aga, anyị kwuru maka atụmatụ dị mma na nke agbakwunyere nke Apricity OS na bat ya. Maka…
NayuOS, nke ọzọ na ChromeOS maka ndị mmepe
Nayu OS na oru ngo emere na Nexedi (ụlọ ọrụ mmepe ngwanrọ) nke na-achọ ikpuchi ọrụ ngwanrọ ...
[Obere nyocha] Na-anwale Solus kwa ụbọchị: 0.201528.6.0
SolusOS amaliteghachiri. Ekwupụtara m na mgbe m nụrụ maka Budgie echere m: "ọzọ ... maka gịnị?" .. Karịsịa na-eche na ọ nwere ike ịbụ ...
Bilie Onye Nwụrụ Anwụ: LMDE 2 Cinnamon na LMDE 2 Mate
M na-echeta oge ndị ahụ mgbe LMDE (Linux Mint Debian Edition) wepụtara izizi, m bụ onye ọrụ Debian na…
Uruk: Isi mmalite mepere emepe nwere njirimara ohuru
Maka oge a, anyị chọrọ ịmebata gị distro nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya na ahịrị sọftụwia n'efu, ...
[Nyochaa] Nitrux 7.15 dị
Via Google+ achọpụtara m (site n'aka onye edemede ya, Uri Herrera) na Nitrux® 7.15 dị ugbu a iji budata. Enwerem ...
Ubuntu CE: Nkesa maka okpukpe
Ubuntu CE bụ nkesa dabere na Ubuntu, nke na-enye anyị ngwa metụtara ezigbo okpukpe ndị Kraịst.
2.5 dị na Icedove 45.1 na Nchọgharị Tor 6.0.3
Dị ka ọ dị taa Tails 2.5 dị, nke bụ ụdị ndozi ahụhụ nke nọ na mmepe ...
KDE Neon, Plasma 5.7 nwere ntọala kwụsiri ike
Anyị niile maara ebe obibi desktọọpụ KDE, otu n'ime ewu ewu na Linux distros. Maka a ...
Firewall, IDS, Cloud, Mail (na ihe ọ bụla na-apụ apụ) n'ụlọ gị
Ndewo. Dị ka ọ na-adịkarị na post m, taa anyị ga-ekwu maka sava, netwọkụ na ihe ndị ọzọ. Iji malite,…
Ihe ohuru na Fedora 24
Anyị nwere Fedora 24 anyị ugbu a, otu n'ime distro kachasị amasị na obodo Linux. Ugbu a ị nwere ike…
AmayaOS, sistemụ arụmọrụ pụrụ iche
AmayaOS bu sistemu sistemu ohuru ohuru, udi UNIX na 100% Ihe ngbaputa efu na GNU GPL v3 License na ...
Linux Mint 18, MATE mbipụta na beta phase
Anyị na-ewetara gị Linux Mint 18 ma ọ bụ Linux Mint 18 "Sarah" MATE mbipụta, ụdị ọhụrụ nke distro a na ...
Manjaro Linux mbipụta 16.06
Versiondị ọhụrụ nke Manjaro distro abịarutela, na mbipụta ya 16.06 dị ka nsụgharị siri ike ma kpọọ Daniella. Na…
Chrome OS ga-agba ọsọ na ngwa gam akporo na Chromebooks
Ugbu a na ụfọdụ Chromebooks ị nwere ike ibudata ngwa gam akporo. Eeh, ugbua ngwa ndị a nwere ike ịme na ụfọdụ Chromebooks;
Nọgidenụ na nke kacha nta na Bodhi distro
N'ime nkesa na-adịghị agwụ agwụ dị na Linux, e kere onye ọ bụla n'echiche nke ịkachasị otu ...
NixOS 16.03 dị ebe a
Ruo izu ole na ole, mbipute 16.03 nke distro a sitere na nnwere onwe dị adị ma sitere na Netherlands, ...
Apricity OS, ihe mara mma ma mara mma distro
Apricity OS nwere ike kọwara dị ka kensinammuo na dị nnọọ oge a sistemụ, na magburu onwe mwekota na ígwé ojii ọrụ….
Mara IP ọha gị site na ọnụ
Obere dị mfe Kedu-Iji mara otu esi amata ma ọ bụ lelee IP ọha gị site na Linux, na-ejighi iji ihe nchọgharị ahụ ...
RaspEX: Nhazi maka Pipe Pi 3 na Ndakọrịta kwardgha
Maka ndị na-eji ma ọ bụ chọrọ iji Raspberries, anyị na-ewetara RaspEX, sistemụ emere maka obere kọmputa a, yana ...
Ndụmọdụ maka Canaima GNU / Linux 5.0
Ekele m, ezigbo ndị na-agụ cyber. N'ime ohere ọhụụ a, m ga-ekwu maka ụfọdụ ndụmọdụ ọrụ aka pụrụ iche nke ga - enyere ndị ...
Ubuntu na Windows, mmekorita n'etiti Canonical na Microsoft
Anyị niile maara Windows, otu n’ime ọtụtụ ‘’ ịkwụ ụgwọ ’’ sistemu eji arụ ọrụ na kọmputa kọmputa desktọọpụ, yana ...
Canonical na-edozi nsogbu ọhụụ asaa achọtara na Ubuntu
Ọ bịara mara na Canonical nwere ike ịchọpụta ahụhụ ma ọ bụ adịghị ike dị iche iche na sistemụ Ubuntu. Ihe kpatara ya bụ ...
A tọhapụrụ AmayaOS 0.08
AmayaOS bụ sistemụ arụmọrụ UNIX, ma ọ bụghị dabere na GNU / Linux, ezubere iji rụọ ọrụ ọkachasị na kọmputa na ...
Ebe nchekwa CentOS 7 nke obodo (enyo)
Ọ bụrụ otu a, lee m wetara gị etu esi enyo CentOS 7. Kedu uru nke a? N'etiti…
Kedu otu esi mara ma Linux Mint emetọwo?
Na February 20, a na-akpọ distro na-ewu ewu, Linux Mint. Akụkọ nke onye isi ...
Ntinye na nhazi nke dnscrypt-proxy + dnsmasq na Archlinux
Okwu Mmalite: Gịnị bụ dnscrypt-proxy? - DNSCrypt encrypts na nyocha DNS okporo ụzọ dị n'etiti onye ọrụ na mkpebi DNS, na-egbochi ...
Maru OS. Android na Debian, na otu ngwaọrụ.
Anyị ekwuola na mbụ maka ntụgharị nke Ubuntu mepụtara maka mbadamba ohuru ya. Nkwekorita, nke ndi oru choro ...
Korora 23 dị!
Remix a ma ama nke Fedora, Korora, nọ na nkeji nke iri abụọ na atọ! Mgbe ọnwa 23 gachara site na mwepụta nke ...
Slackware 14.2 dị ugbu a na beta ụdị
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, ewepụtara beta beta nke Slackware 14.2, nke a bụ otu n'ime ihe kachasị ...
Linux Deepin OS 15 Mara mma ma na-arụ ọrụ
Bọchị ole na ole gara aga, Deep 15 OS malitere, a na-emepụta usoro nke onye ọrụ ikpeazụ na ...
Linux Mint 17.3 "Pink" na akụkọ ya
Linux Mint bụ otu n'ime nkesa ndị jisiri ike nweta mmasị nke ọtụtụ n'ime obodo nke ...
Top 10: Linux nkesa nke 2015
Na-agbanye 2016, ọ bara uru icheta etu 2015 dị ukwuu maka obodo Linux na…
Solus 1.0 OS GNU / Linux distro nwere gburugburu ya na ebe di iche
Ọ karịala afọ abụọ ka SoluOS lara n’iyi mana Ikey Doherty (otu onye n’azụ Solus 1.0 OS) emeghị ...
Qubes OS na nchekwa ya site na iche
Ndị na-agba ọsọ, ụlọ ọrụ gọọmentị na malware ọkaibe nwere ike ịnakọta akara ntanetị ọ bụla nke sitere na kọmputa, ...
Rescatux mgbe niile ka ịzọpụta gị usoro
Mgbe ọ bụla sistemụ arụmọrụ anyị nwere mmejọ, nhọrọ anyị tụlere mgbe anyị nwesịrị ịrụzi ya bụ ịtinyeghachi ...
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Archlinux
Abiala ịhapụ ahụmịhe m mgbe m tinyechara Archlinux iji gosi nchịkọta nke m gbakwunye iji nwee ihe niile ...
Schoolslọ akwụkwọ Linux: Software na Nkụzi Nkụzi
Escuelas Linux bụ nkesa e kere n'okpuru profaịlụ nke iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, gbadoro ụkwụ maka agụmakwụkwọ. Bụ…
Uhie okpu Enterprise Linux 7.2
Uhie okpu ụdị 7.2 dị ugbu a, mbipute a wepụtara na etiti November na ọ bụ ...
GECOS: Akụrụngwa ụlọ ọrụ dabere na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ.
GECOS Suite sitere na sistemụ arụmọrụ ma gbakwunye na ngwa dịgasị iche iche maka ọrụ ...
Nova, nkesa GNU / Linux emere na Cuba
Nova bu nkesa GNU / Linux nke Mahadum Informatics Sciences (UCI) kere na Cuba. Formdị nkesa a ...
OpenSUSE Leap 42.1: Nkesa “ngwakọ” Mbụ
Mgbe otu afọ nke na-echere nkwụsi ike openSUSE, mmalite nke ...
Fedora nsụgharị 23 dị ebe a!
Fedora 23 dị ebe a, na-ezute ụbọchị ọ ga - ewepụta ya maka ngwụcha October (n'agbanyeghị ...
CANAIMA GNU / LINUX: Naanị Ka I Mee Ọrụ Homelọ Gị?
Worldwa nke nkesa Linux dị oke sara mbara, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmepe gburugburu ụwa emeela ...
ReactOS, ụdị Open Windows nke Windows
Mgbe ị na-ekwu maka sistemụ arụmọrụ mepere emepe, ihe kachasịkarị bụ na Linux bụ onye mbụ ga-abịa ...
Ọdụ, usoro nchekwa echekwara maka ịme nchọgharị na ntanetị dị omimi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla maara ntakịrị ihe gbasara eluigwe na ụwa kọmputa, Linux bụ sistemụ echedoro echekwa, mana ...
Wily Werewolf, ụdị nke Ubuntu 15.10 nke nwere ike ime Linux ka ọ dị egwu
Agbanyeghị Linux bụ sistemụ nchekwa dị nchebe na ebe ahụ ma bụrụkwa nke kacha kwụsie ike, ...
Manjaro dị ọhụrụ
Ndị na-anwalebeghị Manjaro kwesịrị, ma ugbu a enwere ọtụtụ ihe kpatara ya karịa mgbe ọ bụla. Na nso nso a, ndi otu amalitela ...
Tanglu 3 dị
N'ime ite ahụ bụ Tanglu 3 "Chromodoris", ihe mgbagha na-adabere na Debian site na Mathias Klumpp. Nke a na-abịa na ...
Linux, a oké IT nche ụlọ
A maara na ebumnuche GNU / Linux n'ozuzu ya nwere nnukwu ntụgharị ma enwere ike ịmegharị ya n'ọtụtụ ọrụ, site na iji ...
Cinnamon Manjaro dịnụ 0.8.13
Ha emeela ya ọzọ. Oge a na Cinnamon. Ndi otu Manjaro Linux eweputala otu desktọọpụ, ugbua ...
Mageia 5 dị
Mgbe otu afọ nke mmepe, Mageia nke ọhụrụ mechara pụta, ụmụ nwanyị. Isi akwukwo ya ...
Goodbye Mandriva, Ndewo Fedora 22
Nyaahụ anyị nụrụ na Mandriva, ụlọ ọrụ, na-emechi. Agụrụ m ọtụtụ okwu mwute na twitter banyere nke a ma m ghọtara ...
Debian 8 Jessie wepụtara
Dị ka ụfọdụ n'ime gị maara, ụnyaahụ, Satọde, Eprel 25, 2015, ọpụpụ nke ọhụrụ ...
OzonOS nkesa maka egwuregwu vidio
Ọ marala ogologo oge na igwu egwu na Linux ị ga-etinyerịrị ọtụtụ ihe iji gbaa Windows egwuregwu, Wine, Playonlinux, ...
2 Debian obere akụkọ
N'otu aka, mgbe ntuli aka kachasị arụmụka na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Kọmitii Nka na-anabata ya ...
Mbilite n'ọnwụ: Crunchbang ++, Bunsen Labs na Bodhi Linux 3.0.0
Fewbọchị ole na ole gafere site na ọkwa banyere ịkwụsị Crunchbang, ruo mgbe ọ bụghị otu ma ọ bụ nnwale abụọ iji ...
Ekpebiela m ịkwụsị ịzụlite Crunchbang. Ọ bụghị mkpebi dị mfe ma etinyela m ya ọtụtụ ọnwa. O siri ike…
Nyochaa: Bido OS Beta 1
Ikey Doherty bụ onye na-arụ ọrụ Linux Mint na-arụ ọrụ; kpọmkwem LMDE, agbanyeghị kpebiri ịhapụ ebe maka ihe onwe onye na ...
Gentoo. Eziokwu n'azụ akụkọ ifo
Gentoo bụ nkesa Linux na BSD nke na-agụta kemgbe ọ malitere na 2002, yana ...
Debian Jessie: Jiri ya mgbe oyi
Ndewo onye obula, ta abia m ịgwa gi banyere ihe mere m ji laa azu maka nkesa ...
Tanglu 2.0 «Bartholomea» wepụtara
Ntughari ohuru nke Tanglu, nkesa nke dabere na Debian Testing
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Fedora 21
Anyị na-egosi gị ụfọdụ ndụmọdụ iji leba anya na ngwa ndị anyị nwere ike ịchọrọ mgbe ị wụnye Fedora 21 na kọmputa anyị.
Slackware 14.1: Mozilla Firefox na Spanish
Slackware 14.1: Mozilla Firefox na Spanish Otu n'ime ihe ndị nwere ike ịbụ ihe na-akpasu iwe na ndị ọrụ Slackware ọhụrụ na-asụ Spanish.
Chromixium: ChromeOS wuru n’ime Xubuntu
Chromixium bụ oru ngo iji weghachite arụmọrụ na mpụta nke Google Chrome na desktọọpụ GNU / Linux.
OpenRC na Manjaro isos maka ndị kpọrọ asị Systemd
Manjaro Community weputara ọtụtụ ISO na ihe dị iche iche nke na ha anaghị eji Systemd dị ka init, mana OpenRC, usoro mmalite nke Gentoo jiri.
[HUMOR… ma ọ bụ ọ bụghị nke ukwuu] Inits jikọtara na Debian: Mkparịta ụka ntuli aka (nke abụọ)
Debian oke parody biputere ma ha kwesiri ikwado otutu inits
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC dị, ka anyị hụ ihe dị ọhụrụ
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC dị ugbu a maka nbudata ya na ọtụtụ akụkọ maka ndị ọrụ ya. Anyị na-egosi gị ihe kacha mkpa.
Kano: Na-eme ka ụmụntakịrị bịarukwuo kọmputa nso nso
Kano bu oru ngo nke n’eme ka ulo kacha nta n’ime kọmputa na ihe ha mejuputara site na ihe zuru oke.
Debian Jessie kefriza na stof
Short ozi banyere Debian Jessie ifriizi.
openSUSE 13.2 dị + ntuziaka nwụnye post !!!
openSUSE 13.2 dị ugbu a na post a anyị na-egosi gị otu esi ebudata ma hazie ya na ntuziaka nrụnye post mara mma
Ọhụrụ openSUSE Tumbleweed dị njikere ibudata mana ugbu a na mbipute Rolling Release. Anyị na-egosi gị otu esi ebudata ya, hazie ya ma kwado ya.
A tọhapụrụ OpenSuse 13.2 na Trisquel 7.0
OpenSuse Factory: Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye ya?
Anyị na-egosi gị ihe anyị nwere ike ime iji nweta nkesa ụlọ ọrụ OpenSuse anyị nke usoro ọ bụla. Maghị ihe ọ bụ? Anyị na-agwa gị ebe a.
Nyochaa: Ubuntu Mate Beta 2, desktọọpụ maka ndị nostalgic
Anyị na-enyocha Ubuntu Mate Beta 2 ma gosipụta ụfọdụ atụmatụ ya bụ isi, yana ọdịdị ya na arụmọrụ ya.
Debian laghachi na Gnome
Debian Jessie ga-alaghachi na GNOME dị ka desktọọpụ ndabara.
A tọhapụrụ AmayaOS 0.06
AmayaOS bụ sistemụ arụmọrụ yiri UNIX nwere ike ịgba ọsọ ọsọ na Pentium 75MHz na 16MiB nke RAM.
Antergos: Nkesa m kwadoro maka ndị ọrụ Arch
Antergos bụ ArchLinux ihe Linux Mint na Ubuntu, ọ bụ ArchLinux mana ọ dị mfe. Anyị na-egosi gị ihe bụ uru ya, nhọrọ na uru ya.
Ka ọ dị Bodhi Linux?
Onye ndu Bodhi Linux Jeff Hoogland ekwuputala na ya ga-apụ.
Porteus: nnukwu nkesa Linux na-ekesa (-300 mb)
Porteus bụ akụkụ nke otu ahọpụtara nkesa Linux e mere ka ọ dị ọsịsọ ma pere mpe.
Linux Mint Debian Edition ga-ahapụ Debian Testing ma dabere na Stable
Otu Linux Mint ahụ ekwupụtala na ọ ga-akwụsị ịgbakwunye ụdị Linux Mint Debian Edition ya na ngalaba ule nke Debian ma mee ka ọ kwụrụ na Stable.
OpenSUSE Factory: ọhụrụ distro Rolling ntọhapụ
emepeuse Factory na-aghọ nkesa mgbasa ozi ọhụrụ na-apụta
CentOS 7 nke ikpeazụ dị ugbu a ibudata
Emebeghi ya ọfụma, mana Centos 7 dị ugbu a ibudata. Anyị na-ahapụrụ gị njikọ njikọta maka ọ yourụ gị.
Manjaro Fluxbox: Mbipụta Obodo 0.8.10 Mwepụta
A tọhapụrụ Manjaro Fluxbox na ọtụtụ njirimara na njirimara dị jụụ, amalitela mmalite mmalite eserese wee mepụta isiokwu ọhụrụ.
Distros maka agụmakwụkwọ: ụfọdụ ezigbo nhọrọ
Anyị na-egosi ụfọdụ nke distros maka agụmakwụkwọ anyị nwere ike iji maka ojiji nke kacha nta n'ụlọ. Yak ise ntak.
Linux Mint 17 Post-nwụnye Ntuziaka iji nyere ndị ọrụ aka ịmalite Linux.
Previous 2014.05.26 dị na ozi ọma
Antergos 2014.05.26 bịarutere na-agbakwunye na akụkọ na-esi ísì ụtọ ọhụrụ nke Desktọpụ Gburugburu, ihe osise dị larịị ma lezie anya, maka ọrụ Numix.
Cinnamon maka Ubuntu: Ndeewo na PPA gi kwụsiri ike
Agaghịkwa edozi PPA anụ ụlọ PPA maka Ubuntu
Chakra Linux Descartes dị maka nbudata
Chakra Linux Descartes, nkesa mara mma pro-KDE, dị ugbu a. Anyị na-egosi gị ụfọdụ ndụmọdụ.
Plasma Na-esote: Inwale ihe ga-abịa n'ọdịnihu KDE
Anyị nwalere ISO nke ọrụ Neon, nke na-egosi anyị ihe Plasma Next ga-adị na ọrụ ha na-arụ. Anyị na-ahapụ gị mmetụta anyị.
Wayland ga-abịa na ndabara na Fedora 21
Wayland ga-abịa na ndabara na Fedora 21, yana Gnome.
Lubuntu 14.04: M na-agwa gị banyere ahụmịhe m
Achọrọ m ịkọrọ gị ahụmịhe m nwere na Lubuntu 14.04 na kọmputa ochie m nwere n'ụlọ. Nsonaazụ nyocha m bụ ...
UbuntuStudio na Edubuntu: Ndi ala ozo abuo
Mgbe anyị na-ekwu maka ekpomeekpo nke Ubuntu anyị na-ekwuputa Kubuntu, Xubuntu na ụdị ndị ọzọ dịka UbuntuStudio na Edubuntu.
Mageia 4: A distro iji banye na akaụntụ
Site na ahụmịhe m, anọ m na-anụ ụtọ Mageia distro kemgbe mmalite ya, m ga-ekwukwa na ọ kwụsiri ike ma zuo oke maka m. Yak ise ntak.
Xubuntu: Ahụmahụ nke Onye Ọrụ
Anyị na-ekerịta ahụmịhe nke otu n'ime ndị ọrụ anyị na-eji Xubuntu. Ka anyị hụ ihe kpatara ya, uru na ọghọm ị na-ahụ na nkesa a.
Ubuntu 14.04: Nyocha dị mkpirikpi banyere arụmọrụ ya, oriri ya, ọdịdị ya na iji ya rụọ ọrụ
Anyị nwalere Ubuntu 14.04 nke ọma wee hapụ echiche anyị na arụmọrụ, oriri, ọdịdị na ojiji ya. Ihe si na ya pụta bụ nnabata.
Atụmatụ 14 ọhụrụ anyị ga-ahụ na Xubuntu 14.04
Na blọgụ Sean Davis achọtala m otu edemede na-atọ ụtọ ebe ọ na-egosi anyị atụmatụ 14 ọhụrụ nke ga-abata na Xubuntu ...
Etu esi wunye gam akporo 4.4 na komputa Linux
Android-x86 bu oru ngo nke gbadoro anya na imegide gam akporo ka enwere ike ịgba ya na netbook, laptọọpụ na ihe ọ bụla ...
arkOS: urukpuru “nkeonwe” gi
Rasberi Pi pụtara mgbanwe na teknụzụ teknụzụ ebe ọ na-enye ohere inweta micro-computer, the size of a ...
Akwụkwọ ndị dị na Manjaro Fluxbox 0.8.9-1 dị
Ndewo onye ọ bụla, Obi dị m ezigbo ụtọ na m ga-enwe ike ịgwa gị nke ọhụrụ mbipụta nke Community mbipụta Manjaro Fluxbox 0.8.9-1 na
5 nhọrọ ịkwaga Windows XP na Linux
Microsoft kwuputara na ọ ga-akwụsị inye Windows XP nkwado na Eprel 4, nke pụtara na ...
Ebee ka inweta ndepụta nke laptọọpụ dakọtara Linux?
Bọchị ole na ole gara aga otu enyi bi na Argentina jụrụ m site na email maka ndụmọdụ m nwere ike inye ya gbasara ...
Ọnwa asaa ka e mesịrị ... Fedora na Mba ndị nwere mmachi, lee anyị na-agakwa.
N'otu oge enwere esemokwu banyere nkwado nke Fedora maka mba ndị na-ata ahụhụ na mgbochi US, nke kwụsịrị ...
KaOS 2014.03 dị na Artwork ọhụrụ
KaOS nwere ohuru version, ma ọ bụ kama ọhụrụ echichi ISO, na emelitere nchịkọta ebe tumadi na…
Habemus Tanglu 1.0, Manjaro 0.8.9 na RC si LMDE
Anọ m ezumike na ngwụsị izu na mmadụ nwere itinye na izu ụka ndị a maka rele
Bido OS: oru ozo sitere n’aka Ikey Doherty
O dobeghị m anya ihe kpatara Ikey Doherty jiri hapụ obodo niile n'akụkụ ...
[HUMOR] Systemd na nke Upstart, arụmụka ahụ rụrụ na Debian
Ezigbo ndị ọrụ Linux, anyị ghọtara na ihe niile adịla njikere maka ntụnyere a nke ga-atụle Systemd na Upstart site na ...
Mageia 4 dị
Kemgbe ụnyaahụ ụdị nke anọ nke mkpụrụ a nke Mandriva dị.
E Nwere KaOS ISO 2014.01 Stable
Site n'aka mgbe niile na-ege ntị ma na-emelite Yoyo308 anyị na-enweta ozi ọma (onye ọzọ?) Banyere igba egbe ...
Nkwupụta sitere n'aka David Tavares, onye nrụpụta PearOS. Tụgharịrị site na Rosa Guillén, nke Yoyo Pear OS na Pear Cloud chịkọtara ugbua ...
Linux Mint 16 na obere ntughari uche
Ndewo onye ọ bụla! Dị ka aha nke isiokwu ahụ na-ekwu, m ga-anwa ime ntakịrị nyocha nke Linux Mint ...
Distros kacha mma maka netwọkụ
N’adịghị ka Windows ma ọ bụ Mac, Linux nwere ọtụtụ nkesa na-eji eserese eserese na gburugburu na ngwa ...
You na-aiming ịsụgharị LFS (Linux Site ọkọ)?
Linux Site na Sccha bụ ụzọ iji wụnye usoro GNU / Linux site na iji aka na-emepe ihe niile. Nke a bụ, na ndammana, a ...
CentOS: Kwadoro site na okpu Red (na obodo)
Short na simplistic version: Fayerwayer: «Linux ụwa freezes, Red Hat will incorporate its clone« CentOS »as its own.»…
Nkesa GNU / Linux zuru oke: openSUSE 13.1 !!!
Ndewo ndị enyi m, ọnwa a enwere m ọnwa mara mma na-agbapụ na PC m yana na laptọọpụ m distro na ...
Adị m nro!
Ndewo ndị enyi m, enwere m olileanya na ị na-enwe ọmarịcha ọnwa nke ọnwa Disemba. Dị ka ị maara nke ọma, onye ọrụ ibe anyị Yoyo Fernández ...
Gịnị bụ Kubuntu? Kubuntu bụ nkesa Linux na-eji KDE dị ka ebe desktọọpụ ya. Ọ bụ Blue Systems mepụtara ya ...
Gịnị bụ Xubuntu? Xubuntu bụ 'distro' ma ọ bụ 'ekpomeekpo' nke nkesa GNU / Linux a ma ama, Ubuntu. Dị ka aha gị ...
Nyocha PearOS 8 (echiche m + nseta ihuenyo)
Ndewo onye ọ bụla, oge ụfọdụ (ọ bụghị nke ukwuu) PearOS 8 wee pụta, na ụdị MacOS enwetaghị uche m, ...
Etu ịwụnye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander site na nzọụkwụ
Ọ bụrụ na ị na-amalite na Linux, enwere ike ịgwa gị ka ị gbalịa Ubuntu: nkesa dị mfe ma dịkwa mfe ...
Ntụziaka m iji chọta Distro Kwesịrị Ekwesị
Ezigbo Distro bụ distro ahụ ị gaghị achọta, ọ dị ebe ahụ, mana ị gaghị achọta ya. Nwere ike ịmata ihe niile ...
Mgbe ị wụnye Fedora 19/20
Ndewo ndị enyi si desdelinux.net. Anọ m na-eji Fedora na XFCE ogologo oge na PC desktọọpụ m na laptọọpụ m na-anọchi ...
Otu ọnwa na Manjaro Linux
Ndewo ndị niile na-agụ akwụkwọ! Taa, m na-eme obere nyocha, ma ọ bụ kama, ịza ajụjụ banyere ahụmịhe m na ...
Tanglu na-aga n'ihu, anyị ga-enwe mmalite n'oge na-adịghị anya.
SolusOS anwụọla, mana Tanglu, onye ọzọ n'ime ọrụ m lere anya ogologo oge gara aga, na-aga n'ihu ...
Coplas de Diazepan maka Ọnwụ nke SolusOS
Ihe na - anwụ n’ime mkpụrụ obi mgbe enyi hapụrụ ụwa a.
You ga-akwụ ụgwọ maka ElementaryOS?
M bido n’isiokwu a site na ikwu ebe okwu a si. Ọ na-egosi na site na G +, Daniel Foré (onye isi nke oru ElementaryOS) jụrụ ...
Ubuntu 13.10 Ntọhapụ dị iche?
Echi ga-abụ ụbọchị a tụrụ anya ya site na nde ndị ọrụ gburugburu ụwa, ndị ọrụ Ubuntu n'ezie. Ma ọ bụ na ...
Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 dị na ụfọdụ ndozi
Agbanyeghi na abughizi m onye oru Xfce, ekwenyesiri m ike na Xubuntu bu otu n'ime nkesa kacha mma inwe ...
Dax OS 2.0.2 na ato uto ya di maka nbudata
Taa ka emeputara ụdị 2.0.2 nke Dax OS na nke ọ bụla n'ime isi anọ ya, Desktọpụ, Kidsmụaka, Ndụ ...
Maka nbudata Zentyal 3.2
Zentyal (nke a na-akpọbu Ebox) abụrụla ezigbo ihe ngwọta maka SMEs n'ihi atụmatụ ya na ịdị nhịahụ ...
Ihe ohuru ohuru a gha eji QT
Ndewo GNU / Linuxmaníacos, ọzọ elruiz1993 na-ewetara gị ihe kachasị ọhụrụ nke ihe ọ mụtara. Ugbu a…
Canaima4 na beta na-adọ
Ndewo ndị niile na-agụ blọgụ ahụ, aha m bụ Jizọs na nke a bụ ọkwa mbụ m maka DesdeLinux. Ugbua…
SolusOS 2 Alpha 9 dị
Cheta SolusOS? Ee, nkesa ahụ nke m kwuru n'oge ahụ ruo mgbe ike gwụrụ ruo n'ókè, na ...
Dị iji nwalee Tanglu LiveCD
Cheta Tanglu, na nkesa m hụrụ n'anya na-enweghị mkpakọrịta nwoke na nwanyị? Tanglu bu distro nke gbadoro ...
Dax OS Experimental: ihe omimi di omimi maka nbudata
Maka ndị na-amaghị Dax OS, kwuo na ọ bụ nkesa dabere na Ubuntu, nke na-eji dị ka gburugburu ebe obibi maka ...
eOS - Mmalite nke ihe ukwu?
N'ime nkesa ndị dabeere na Ubuntu, amụrụ kpakpando nke nwere ìhè nke ya. Na sistemu a nwere ọtụtụ ihe ...
SolusOS 2 Alpha8: nke mbụ ISO maka ndị mmepe na ndị nnwale
Anyị ekwughi okwu gbasara SolusOS 2 ogologo oge maka ndị na-anaghị echeta, SolusOS bụ nkesa ...
Ma agbanyeghị na ọ bụ n'efu ... Nsogbu Fedora na mba ndị amachibidoro iwu.
SynFlag na blọọgụ ha metụrụ isiokwu na-emetụ n'ahụ. Anọpụ iche dị ka o kwere mee, aga m ahapụ ya ...
ZevenOS Neptune 3.2 dị
Agwala m gị maka ZevenOS Neptune n'otu oge, nkesa na-eji Debian Wheezy dịka ntọala mana na anyị ...
Snowlinux glacier - snow kpuchie Mint
Ebe ọ bụ na laptọọpụ m na-achọ ịla ezumike nká, Achọrọ m iji ya dị ka ala nyocha wee wụnye distro na, ...
Ahụmahụ Manjaro - OpenBox na Pentium IV
Ọ dị mma nke ọma. Abia m ịgwa gị ntakịrị ihe banyere ahụmịhe m na GNU / Linux nwere PC "ala-njedebe". Na-achịkọta…
ElementaryOS Stable: Ntinye + Nyocha
Ternyaahụ pandev92 ji ezigbo mma nyochaa banyere ElementaryOS (site ugbu a gaa eOS), yabụ m na-aga ...
Elementary Os Luna, mechara kwụsie ike! Nyocha
M na-eji Lubuntu ụbọchị ndị a ezi obi ụtọ, belụsọ maka ụfọdụ njehie m nwere na mwegharị nke ụfọdụ mmemme windo….
Counter na saịtị eOS Anyị ga-enwerịrị nsụgharị nsụgharị?
Naanị m na-abanye saịtị eOS (aka ElementaryOS) na achọtara m dị mfe ma maa mma (ọ nweghị ike ịbụ ...
SolidXK: ihe kacha ọhụrụ Linux distro?
Schoelje, onye bụ isi onye na-elekọta distro a, rụrụ ọrụ na Linux Mint, na-eke ụdị "nsụgharị" nke Linux Mint Debian ...
Odyssey na AMD part1
Ejirila m Satọde niile na ụnyaahụ Sọnde na-ahazi PC wee nwalee ihe dị iche iche na nkesa GNU / Linux. Dị ka…
Slackware Installation Log: Ọ bụghị ihe niile bụ ihe ọ dị ka ya
Ekele m unu niile. O doro anya na ị hụla m ka m na-ekwu okwu site na Debian na ihu ọma m banyere disro ahụ na ndị ọzọ na ...
Linux Mint 15 “Olivia” Xfce dị maka nbudata
E kwupụtara na Linux Mint Olivia ka a mara ọkwa na ụdị Xfce ya, nke na-abịa na ụdị ahụ ...
Ubuntu: Icheta ihe otu ụbọchị bụ
O doro anya na ọtụtụ na-ahụ aha ma ọ bụ onye dere edemede a ma chee: Elav na-abịa ịwakpo ...
Arch Linux + KDE Installation Log: Knowingmara ihe dị iche
Nyaahụ m arụnyere na ndị kasị ewu ewu GNU / Linux Rolling Hapụ nkesa na otu nke kọmputa na-arụ ọrụ:…
Trisquel 6.0 LTS GNU / Linux: Ọrụ na Nnwere Onwe
Alụla m di na nwunye ruo oge ụfọdụ n'ihe m chere na ọ bụ otu n'ime nsogbu kacha mma na oghere GNU / Linux. Ha…
Fedora 19: Obere Nyocha
Hapụ desktọpụ gị na Fedora. Fedora bụ sistemụ arụmọrụ kwa ụbọchị, nke ịbụ ngwa ngwa, kwụsie ike ...
Gbakọọ Linux: Otu Amalgam n'etiti Sabayon na Gentoo (fedora 19 bịakwara)
Ihe dị iche n'etiti iji Ubuntu na iji Debian dị ka obere ma e jiri ya tụnyere ọdịiche dị n'etiti iji Sabayon na ...
Gbalịa Ubuntu na Canaima site na ihe nchọgharị ahụ
Maka ndị ọrụ ọhụụ batara GNU / Linux, otu n'ime ihe na-eme ka ha sie ike nghọta bụ ...
Linux Deepin: Ikekwe nkesa kachasị mma m hụtụrụla
Naanị m chọpụtara site na Webupd8 banyere ntọhapụ nke Linux Deepin 12.12, nkesa China nke dabeere na Ubuntu 13.04 na…
Chocolate maka akụkọ: RHEL 7 na-aga iji desktọọpụ kpochapụwo.
N'oge na-adịbeghị anya, Red Hat Summit 2013 ma enwere nkọwa ole na ole gbasara ụdị ọdịnihu ga-ekpughe ...
Linux Mint 15 "Olivia" dị maka nbudata
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị na-ekwu maka nnweta Linux Mint 15 «Olivia» RC, ọ bịara taa taa ...
ZevenOS Neptune 3.1 dị
Anyị ekwuolarị banyere ZevenOS Neptune na DesdeLinux, nkesa magburu onwe ya dabere na Debian nke na-erute nsụgharị ya ...
A tọhapụrụ Mageia 3
Ọfọn, dị ka aha ahụ si kwuo, na May 19, 2013, e wepụtara ụdị nke atọ nke distro a ...
Alfa 4 nke mbụ Canaima dị
Ututu oma nu umunnem niile no na Software efu na obodo Gnu / Linux. Enwere ike ole na ole ga ...
Linux Mint 15 "Olivia" RC Ugbu a dị
N'oge na-adịbeghị anya anyị kwurula banyere mgbanwe ndị na-eso Cinnamon 1.8 abịa, taa Clem mara ọkwa na ọ dị maka ...
Echere m na: Debian 7 enyerela Gnome Shell aka
Maka ebumnuche ọrụ ọtụtụ ọnwa gara aga, m ga-eji Debian (nke m hụrụ n'anya mgbe niile, mana m na-eji ...
Ndị elementrị Ahụmahụ (Beta) 2: Imegwara
Ndewo, m bụ elruiz1993, enwere ike ị chetara m Post ochie dị ka Pantheon: The Elementary Ahụmịhe na Otu esi enweta WiFi (kaadị…
Akwụkwọ ntuziaka Debian dị na Spanish
Raphaël Hertzog, otu n'ime ndị mmepe Debian kachasị mkpa, ezigala na ibe obibi nke Debian Administrator ...
Paaaaaaaaaain ndị press. Debian 7.0 Wheezy wepụtara
Kedu ihe na-abịa na nsụgharị ọhụrụ a? * Apache 2.2.22 * akara mmuke 1.8.13.1 * GIMP 2.8.2 * GNOME 3.4 *…
Sabayon 13.04 na ntuziaka ọhụrụ maka ịhọrọ distro
Obere ihe abuo: Nke mbu bu nbido nke iso nke ohuru nke Sabayon, nke bu distro na Gentoo ...
Ubuntu 13.10 ga - akpọ Saucy Salamander
Dị nnọọ ka ha na-anụ ya. Onweghi ihe mere kemgbe mmalite nke Raring Ringtail na Mark Shuttleworth dọrọ aka na ntị na ...
Font ire ụtọ na qtgtkstyle Opensuse 12.3
O doro anya na ihe karịrị otu onye enwetawo, na distros ekwesịghị, dị ka iwu zuru oke, smoothing ...
A ga-ahapụ Debian Wheezy na mbido Mee
Nke a mara ọkwa site na Neil McGovern na Debian mmepe 'nzipu ozi ndepụta, ebe o doro anya na onye ọ bụla ...
Mgbe m na-ede edemede gara aga, achọpụtara m banyere nke a ma ọ wutere m nke ukwuu. Andrew Wyatt, onye okike nke Fuduntu ...
Clem chere na-efu efu
Manuel de la Fuente ekwuolarịrị etu Cinnarch na Manjaro si hapụ Cinnamon na ọtụtụ ihe kpatara ya: 1)…
Cinnamon ka fọdụrụ naanị: Manjaro kagburu mbipụta ya na desktọpụ a
Nyaahụ anyị kwuru banyere ozi ọma na Cinnarch, nkesa dabere na Arch Linux na Cinnamon dị ka gburugburu desktọọpụ, na-ahapụ ...
Siduction: Ntinye, nhazi na nyocha dị mkpirikpi
M na-eji Debian, ahụrụ m Debian n'anya ma enwere ọrụ atọ na-adọrọ uche m: Tanglu, nke anyị kwurula banyere ya, ZevenOS ...
Cinnarch hapụrụ Cinnamon maka GNOME Shell
Cinnarch bụ otu n'ime ọtụtụ igbe distros dabere na Arch Linux nke pụtaworo na afọ ...
Sabayon, ikekwe onye ọrụ enyi kacha nwee mmekọrịta
Mgbe m hapụsịrị Ubuntu izu abụọ gara aga n'ihi akwa nke Compiz na MPlayer malitere ime ka m ...
ZevenOS Neptune: Nchọpụta na-akpali mmasị na Debian Testing
ZevenOS Neptune nke a makwaara dịka Neptune bụ ngalaba nke obodo nke ZevenOS dabere na Debian ...
Wụnye Debian Squeeze na desktọọpụ Xfce
Anaghị m akwado ịnwe sistemụ arụmọrụ abụọ dị iche iche arụnyere na draịvụ ike (s). Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na m maara n'ezie ...
Kedu ihe m ji eji Debian na desktọpụ m?
Enwere ihe kpatara na imegide Debian. Otú ọ dị, ndị na-akwado si ...
Debian Backports agbakwunyere n'ime ebe nchekwa (isi)
Ozi di oke nma na ha zitere m site na mail, nke i nwere ike igu ebe a na Bekee na m gbaliri imeghari ...
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Fedora 18?
Dị ka ụfọdụ n'ime gị maara, abụ m onye Debian, CentOS na oge ụfọdụ onye ọrụ OpenSUSE. Ugbu a, ebe ọ bụ na m na-eji CentOS enwere m ...
Tanglu Onye ọzọ nke ụyọkọ ahụ?
Ekwupụta m ya. Naanị ụnyaahụ, achọpụtara m banyere ọrụ ọhụrụ a a na-akpọ Tanglu na enwere m obi ụtọ (ma eleghị anya ngwa ngwa). Ma Tanglu ga ...
Tanglu: Usoro nkesa nke Debian
Kedu maka, dị ka aha ahụ si kwuo, Tanglu bụ nkesa ọhụrụ nke ga-adabere na Debian Testing, na ...
Xubuntu 13.04 Beta dị
Ndị otu a tọhapụrụ beta mbụ nke ihe ga-abụ Xubuntu 13.04, nkesa na ...
Budata OpenSUSE 12.3 + Otu esi ahazi ya?
Ndewo ndị enyi si DesdeLinux. Emeela ka ekesa OpenSUSE 12.3 :). Na post a, m ga - egosi gị ...
CentOS 6.4 dị .. + Otu esi hazie ya :)
Na March 9, 2013 ka mbipute ohuru nke CentOS 6.4 weputara. N'okpuru ebe a bụ ọkwa ọkwa ...
Ubuntu, Fedora, na Stuffy Distro
Mgbe ị wụnye Ubuntu 12.10 na kọmputa m iji nwalee emelitere nke Unity na nyochaa na ọ kwụsiri ike (ee ...
Na gị…. SolydXK
Emechiri mbipụta gọọmentị nke LMDE KDE na Xfce. Ọ ga-amasị m ịkele Schoelje maka ọrụ dị egwu that
Ubuntu kacha nta CD
Edere edemede a na Taringa site na onye ọrụ nke kpọrọ onwe ya Petercheco na onye gwara m ka m tinye ya ...
Chakra ISO Netinstall wepụtara maka ule
Mmepe Chakra anaghị akwụsị, Tribe kwa, onye nrụnye ya. Mgbe nnukwu ọrụ tinye ihe niile na ...
Debian 7 Kedu ihe ochie ochie?
Taa, m na-agwa gị banyere ntọhapụ nke mbụ RC nke Debian Installer na m hụrụ njikọ ...
SolusOS 1.3 wepụtara
SolusOS Team nwere obi ụtọ ịkpọsa mwepụta nke SolusOS Eveline 1.3. Nke a bụ nnwepụta mmezi, na ...
Debian Installer 7.0 Hapụ nwa akwukwo 1 dị
Onye weputara nke mbu nke onye Debian 7.0 installer weputara ubochi abuo gara aga, nke di nma ...
Baby nloghachi !! Kubaa Kubuntu, ndewo Debian
Kubuntu ejirila ihe dị ka otu izu rụọ ọrụ na kọmputa m ma eziokwu dị mfe bụ na ...
Nwere ike ibudata Chakra 2013.02 "Benz"
Gụ RSS m achọpụtara site na blọgụ Marcel na Chakra 2013.02 nwere ike ibudata maka ụbọchị ole na ole ...
Nwalee Kubuntu, pụọ na aka Canonical
Nyaahụ m wụnye Kubuntu 12.04 na ọrụ Netbook m, ihe niile n'ihi KDE 4.10 nke m na-anwale ugbu a ...
Ubuntu nwere ike ịbụ ịfefe ntụgharị n'etiti nsụgharị LTS
Ugbua ozi m na-ewetara gị na-agba ọsọ dị ka ọkụ na weebụ, ọ bụkwa na ọ bụrụ na ọ bịakwutere Ubuntu ...
Mepụta DVD Debian nke gị
Dị ka isiokwu ahụ si egosi, ewetara m gị edemede nke na-enye ohere ịmepụta omenala Debian DVD….
Ntuziaka: Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Debian
Onwe m, m ahọrọla Debian Testing mana ọ bụ otu ihe ahụ maka ngalaba ụlọ ahụ kwụsiri ike. Nke mbu, ana m akwado gị ...
Fedora 18 apụla
Na ngwụcha, ọnwa abụọ gafere, mana n’ikpeazụ, Fedora 2 Spherical Cow bịara. N'ime akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ o nwere: GNOME ...
Gentoo echichi nkuzi ọ bụla Live CD
Ndewo, a bụ m x11tete11x, nke a bụ onyinye m nke abụọ, n'oge a ana m ewetara gị nkuzi nkuzi Gentoo tupu ...
Nkesa emere ka ọ bụrụ Firewall
Anyị bụ ndị nọ n'ime ụwa nke GNU / Linux na Free Software, ejirila eziokwu ahụ na ụbọchị ọ bụla anyị maara otu ...
Nweta nọmba ọrụ Debian gị
Hụtụla ndị ọrụ Ubuntu ihe dịka "Ubuntu 526nye XNUMX" na obere onyonyo? Ọfọn…
Idozi nsogbu Wifi (Broadcom 43xx) na ubuntu mgbe emechara ya
Fọdụ ndị nwere nsogbu na ubuntu mgbe emesịrị emelite usoro ahụ (Na m na-ekwu maka onwe m: - |). Ihe na-eme bụ…
Ọ na-egosi na m isiokwu na CUTI enịm ke nri oge n'ihi na e nweghị ndị ọhụrụ posts e mesịa….
Firmware, nro akụkụ 3: Etu esi etinye Linux na igwe nwere Windows boot boot nkebi arụnyere
Karịa echiche echiche ọ bụ nkuzi, mana ka anyị gaa n’azụ. N'ime nzukọ ahụ ekwuru m na m ...
Mgbanwe na ozi ọma maka LinuxMint 15
Agụ na Webupd8 Achọpụtara m na emelitere Roadmap maka Linux Mint 15, nke ha ga-abịa ...
E nwere Slax 7 «Green Horn»
A tọhapụrụ Slax mbipute 7.0, nkesa nke anyị kwurula maka ya na blọọgụ a na ...
Enwere distro ọ bụla….
Edere osimiri nke gburugburu gburugburu mkparịta ụka n'etiti ndị na-akwado mgbalị na ndị na-akwado ...
Mepụta Cyber ​​Café na akwụghị ụgwọ na GNU / Linux
Oge gara aga ajụjụ a bịakwutere m, ọ bụrụ na enwere ike ịme ụdị ihe a. Bọchị ndị a ka m nọ na-eme nchọgharị na ...
Broccoli mara mma: Nke a bụ aha Ubuntu 18.04?
Anyị niile nọ na-eche ihe ga-eme mgbe Ubuntu gwụsịrị aha (koodu ma ọ bụ igodo), nke ukwuu iji rụchaa ...
Gịnị kpatara Debian?
Nke a bụ isiokwu m gụrụ na blog humanOS ebe onye edemede ya nyere ụfọdụ njirisi onwe onye ...
My .bashrc Debian Wheezy
Ọfọn ... Taa, m na-ewetara gị nhazi m nke. bashrc .. Kedu ihe na-atọ ụtọ? Ihe mbu bu na o nwere ...
Ebee ka anyị ji tebụl nke oge a na-aga?
N'ikpeazụ na-enweghị nnukwu mkpuchi, systemd abanyewo na ArchLinux. Naanị otu ozi na ndepụta nzipu ozi zuru ezu iji ...
Slackware 14: Ntinye Ntuziaka
Nyere obere ozi anyị nwere ike ịdabere na mgbe anyị mere mkpebi ịbanye na ụwa Slackware, enwere m…
Elementary Luna Beta 1: Naanị Mma
ElementaryOS bụ naanị nkesa na mgbe m hụrụ ya, ọ na-eme m chọrọ ịpụ na Debian + KDE, na ...
Slackware 14: Downnụ Anụ Ahụ
N'ezie, ọtụtụ ndị ọrụ GNU / Linux amalitela ije n'ụzọ penguuin site na nkesa dị mfe ...
Debian na-alaghachi na Gnome dị ka ebe nchekwa Desktọpụ ndabara?
O doro anya na, nkwa nke Christian Perrier na-akwado na Debian ga-eji Gnome dịka Desktop Environment ọzọ maka…
Linux Mint 14 «Nadia» RC dị
Amaghị m ihe kpatara akụkọ a anaghị ewetara m otu mmetụta dịka ọ dị na mbụ, ikekwe, maka Linux Mint na-eme ...
SLAX 7 RC1 Dị
Slax, myro akụkọ ifo distro dabere na Slackware, dị maka nbudata, Hapụ Nwa akwukwo 1, nke nwere ...
Kubuntu na Xubuntu, ngwaahịa abụọ akwadoro ma kwado
Enwere m ihe doro anya: ebe Kubuntu na Xubuntu bidoro ilekọta ya anya, ha abụrụla ...
Slackel KDE 4.9.2: Distrik sitere na Slackware nwere KDE kacha ọhụrụ
Ahapụla Slackel KDE 4.9.2, ị na-echekwa ... gịnị bụ ihe a? Site n'aha ya anyi ghota na ...
GNU / Hurd ọ ga - eji dochie GNU / Linux?
Daysbọchị ndị a ka m na-agụ akwụkwọ mbu nke blog ma gụọ ihe kwuru n'ụzọ nkịtị «Nke a bụ ...